I-iTalkBB iTshayina iTV yeTV eKhethekileyo yeVeki eziqaqambileyo eAustralia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Kulapho ke luhlala khona usapho lwam eMelbourne!Phatha umdlalo kude njengomdlalo wakho wasekhaya, kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.澳洲唐人街- 中华澳网China Town News澳洲唐人街;澳大利亚华人社区和主流新闻媒体Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Idolophu Iindaba Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba I-iTalkBB iTshayina iTV yeTV eKhethekileyo yeVeki eziqaqambileyo eAustralia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Kulapho ke luhlala khona usapho lwam eMelbourne!Phatha umdlalo kude njengomdlalo wakho wasekhaya, kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.澳洲唐人街- 中华澳网China Town News澳洲唐人街;澳大利亚华人社区和主流新闻媒体Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Idolophu Iindaba Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba
首页 > iTalkBB Iveki enye Isikhokelo seTV saseTshayina > isicatshulwa
Ukuvuza iTalkBB Iveki enye Isikhokelo seTV saseTshayina 0 0
"IChinatown"-Iendaba zosasazo zase-China zase-China
"USista Hua Yang"
Ijelo losasazo: I-Dragon TV ingabukelwa kwi-iTalkBB iTV yeTV eQokisekileyo yoQokelelo-oluSaseleyo lweSayithi
Ukugqitywa kokugqibela kwe "Sista Huayang", Ingoma Qian, ebukelwe ngu Xi Meijuan, wakhwela inqwelo eyayilungiselelwe liqela lenkqubo kwaye waya kwisikhululo seenqwelomoya, egqiba uhambo lwakhe ngaphambi kocwangciso. Kwaye kumzuzu wokugqibela wokumka eTurkey, eli nenekazi liselula elinenzondelelo alizange lilibale ukunika amava kwintombazana entsha "ethathe inxaxheba" uYang Zi.
Kungenzeka ukuba ubomi obunzima ngomhla wokuqala babunomtsalane .. Into yokuqala yathethwa nguNgoma Qian ukuba "uyadinwa" uLi Zhiting, ekhumbuza udadewabo owangena ezihlangwini zakhe ukuba alungiswe ngengqondo. Nangona kunjalo, emva kokuphumelela kwiinqwelomoya ezimbalwa, uSong Qian uvumile ukuba Iqela laseHuayi sele "liyityebi" ngalo mzuzu, kwaye kwakungekho kusilela komona ngamazwi akhe. Unokungazi ukuba ukulungiselela ividiyo yomhla wokuzalwa, uLi Zhiting ngesisa wakhupha ii-euro ezili-1000 XNUMX azisindise ubunzima obungenakuthelekiswa nanto.Imeko yezezimali yeqela leFantasia yayingenathemba njengoko wayecinga.
Ukwenzela ukuthintela lo dade mtsha ukuba angothuswa "yimeko esebenzayo" yoothixo noothixokazi, u-Song Qian ugonyo uYang Zi, kwaye ugxininise ngakumbi ukuba bangothuki ngu-Wang Lin kunye no-Ma Tianyu. Bobabini babeqhelene, kwaye bobabini babethanda ukwenza umdlalo wokuncokola. Bancokola nje kwakamsinya nje emva kokuba bedibene, kwaye babengenakuyekisa ukuxabana kwabo. Mhlawumbi kuyahlekisa ukucinga malunga naloo ndawo. Ingoma Qian yancuma uncumo kwaye ikhalaza ukuba bobabini "banengxolo engaphezulu. Ndicebisa ukuba ukuba udade omncinci uYang Zi uzive enoloyiko kwaye enxunguphele, unokubuza udade omkhulu uLin Chiling kumnyango olandelayo ukuba enze njengomntwana," uyakukubamba. Ndikunike intuthuzelo ". Iingcebiso ezinabileyo zikaMiss Victoria Song zidweliswe nganye.
Ijelo losasazo: I-CCTV-1, inokujongwa kwi-iTalkBB yeTshayina yoQokelelo oluQokisekileyo yoSasazo oluDibeneyo-oluShushu
Ngaphezulu kwesiqingatha sesibini sexesha le-CCTV iseti "yeChinese eqaqambileyo". Umlawuli uZhang Li udize ukuba abagwebi abathathu uZhou Libo, uCai Guoqing, kunye noFan Bingbing baya kwenza imisebenzi yabo ukwenza le nkqubo ibonise impembelelo entle kakhulu. Kwinqanaba elizayo, Umlawuli u-Chen Kaige uza kujoyina. Kwangelo xesha, inkqubo yokhuphiswano yenkqubo nayo iza kutshintsha. "Imidlalo yamanqamu yohlulo iza kwahluka kulo nyaka uphelileyo. Siza kuqalisa ngokuphathwa gadalala kwabadlali ngokombono wamaphupha ethu, kwaye inkokeli iya kuba nguCara Kaige. Siyathemba ukuba abadlali bazakuba nento kwenkqubo. Ngokwelinye ilizwe kufuneka ujoyine iqela lejaji, kwaye bayakucebisa "ngombala wesiTshayina onemibala ehlukileyo" emehlweni abo. Nangona kunjalo, iqela leqela liya kwahluka koko kubonwe ngumntu wonke. Iqela lomlawuli lisaxoxa.
Vula iakhawunti yeTV kwaye ufumane unyaka omnye wobude obude bamazwe
iTalkBB iTV yeTshayina lelona qonga likhulu lonxibelelwano laseTshayina phesheya kwezilwandle. Iyaqhubeka nale meko, ukubetha iindawo ezishushu, kunye nokuhlaziya umxholo wenkqubo ngexesha elifanelekileyo.Iqokelela ngaphezu kweendlela ezingama-50 zeTV eChina, Hong Kong, naseTaiwan, kunye nenani elikhulu leefilimu neenkqubo zikamabonwakude zeendaba.Ixhasa uvavanyo-olufunekayo kwaye aluphosi amaxesha amnandi eTshayina. Kuphela yi- $ 9.99 / ngenyanga, isiqinisekiso sokubuya semali-seentsuku ezingama-30. Kukho umnikelo okhethekileyo wokuthenga i-TV kunye nokufumana umnxeba.Ngalo lonke ixesha kuvulwa i-akhawunti ye-TV, unyaka omnye uya kubekwa kude, kwaye iifowuni zenyanga ziye kumazwe angama-28 ziyaxhaswa ngeelayini okanye iifowuni eziphathwayo. Eyona nto ingenaxabiso elifanelekileyo kwintengiso, nenani leendawo.
Ingcebiso ngongcelele lweTV
Inkwenkwezi: Yu Hewei, Hengming, Wang Lin, Bai Bing
Uhlobo: Isixeko esikwixeshana
Umdlalo ubalisa ibali elibuhlungu emva kothotho lwemitshato eyaziswa ngamaqela amathathu emitshato. Umtshato wegqwetha eliselula uZhang Kaiming kunye nentombi yakhe uXiao Linglong bekunzima kakhulu ngenxa yokuxhonywa kwesizalo sangaphambili kwezi ntsapho zimbini.sinye isibini, uYang Xiaoting kunye noGa Han, sabangela ukuba elinye icala elithandanayo ukuba lihambe ngenxa yokuba umfazi wakhe uYang Xiaoting ephika ngokukrokrela ukuba umyeni wabo unobuhlobo. Ukuphelelwa lithemba. Abazali bakaZhang Kaiming abaqhawule umtshato, uZhang Jianguo kunye noZhao Xiujie, ekugqibeleni baqonda ukuba ikamva labo lixhonywe ndawonye kangangesithuba seminyaka, kwaye abanakukwenza ngaphandle komtshato, batshata kwakhona. Ukudibana kweeseti ezintathu zemitshato kwenza wonke umntu wakhetha ukukholelwa kuthando endaweni yezinto. Isivumelwano sephepha asinakho ukusombulula zonke iingxaki ezivelayo emtshatweni.Umtshato olungileyo ufuna abantu babini abathandanayo ukuba basebenze kunye.Umongo womtshato kukuba sikhetha ukukholelwa ukuba omnye komnye angahlalisana.
"Inqaku loMlawuli wokugqibela"
Inkwenkwezi: UZhao Wenxuan, uYu Shaoqun, uJiang Linjing, uGao Hao, uLanga Yaoqi, uZheng Zeshi, uHui Yinghong, uGu Yalei
Uhlobo: Isinxibo / Imbali
Umdlalo ubalisa ibali eliyintsumpa neliphezulu kunye nelasekumkani wase-China u-Aixinjueluo Puyi, ukusuka kumlawuli ukuya kwintloko yelizwe, ukusuka kulwaphulo-mthetho ukuya emfazweni, emva kozuko lokugqibela lwesiXeko esinqatyisiweyo, uTianjin Yugong waya emantla waba ngu "Emperor of Manchuria". IJapan yoyiswa yaza yathinjelwa eSoviet Union kangangeminyaka emihlanu .. Emva kokuba egxothiwe ebuyele eChina njengesaphuli-mthetho semfazwe, wanikwa uxolelo. Olona suku luqaqambileyo noluthembisayo ebomini bakhe lufikile.Uthatha inxaxheba emsebenzini nakunyulo njengommi nje, kwaye ekugqibeleni uhlaselwe ekuqaleni kwexesha elitsha, engathandabuzi ukuba uza kufa ngobomi obutsha. I-Qing Dynasty inyukile kwaye yawa phantse iminyaka engamakhulu amathathu.Iyinzalelwane yokugqibela yesizwe sobukhosi.Ngokuphakathi kweenkosi ezingaphezulu kwama-XNUMX, ingumlawuli wokugqibela. Ayinakunceda nto. Ikamva lakhe linxulunyaniswa nokunyuka kobukhosi kwesaTshayina esitsha, kwaye sisisiqendu senguquko yoobukhosi babini base China.
"Umlo omkhulu ka-XNUMX"
Inkwenkwezi: Zu Qing, Zhang Lin, Deng Yuting
Uhlobo: Umdlalo weqonga / wemfazwe
Umdlalo bhanyabhanya "Imfazwe enkulu ka-2012-7" yibhanyabhanya eyimbali kunye neyomlo ebhalwe phantsi kwaye ikhokelwa nguFeng Xiaoning kunye neenkanyezi uLu Yi, uXia Yu, uYang Lixin, uLanga Haiying noLu Liping. Ifilimu iqala kwasebuntwaneni be-protagonist u-Deng Shichang, kwimbono yokuhlonipha kunye nokubuyisela imbali, ityhila iinyani ezingaziwayo zembali kwihlabathi, kwaye uxelele izenzo zobugorha zookhokho bethu ekulweni nobundlongondlongo baseJapan kwiminyaka ye-Jiawu. Ifilimu yakhutshwa kwilizwe lase China ngokubanzi nge-6 kaJulayi ngo-15, kwaye yaphumelela imbasa yeFilm kwi-XNUMXth yeFilimu yeHlabathi yeFilimu yeChannel yezeMidlalo.
Msgstr "Ukuphanda isixhobo"
Inkwenkwezi: URuan Jingtian, uZhou Dongyu, uYang Zishan, uYang Yang
Uhlobo: Ukuhlekisa / Intshukumo / Ukurhoxa
Kukho imvumelwano emininzi kwimakethi yangaphandle ye-Shanghai yeemayile ezilishumi.Baninzi abenzi bobubi, abantu abaninzi bazizidenge, i-glitz kunye nolwaphulo-mthetho olupheleleyo, ngenxa yoko igama "I-Paradiser Paradise" kunye "neSixeko Somlingo".
Njengomnye wabahloli "abakrelekrele kakhulu" kwikhontenti, uFan Ruyi (Ruan Jingtian) kufuneka ajongane nabafundisi-ntsapho abathathu kunye ne-liu ezilithoba yonke imihla, kwaye afumane zonke iintlobo zolwazi lophando kubo, aze ke aphumelele ukuthembela kumqeshi. Kodwa kude kube yimini enye, emva kokuthatha umsebenzi weemfihlo eziphezulu kumqeshi, iziganeko ezahlukeneyo ebezingalindelekanga nezingaqhelekanga zalandela enye emva kwenye: intombi yomkhosi ogama linguSong Xiaoqiao (edlalwa nguYang Zishan) ethinjiwe, umntwana oselula u-Xiaoliu wasweleka esitalatweni, umfundi oyintombazana wesikolo obalaseleyo. Bonke abantu abasebenza nabo kwigumbi lokujikeleza babandakanyekile kwaye akukho namnye kubo owasindayo.uFan Ruyi wazama ukunqanda abamsulwa ukuba angabulawa, kodwa akazange ayilindele ke loo nto.
Ukucima isimangalo, uFan Ruyi uzame konke okusemandleni akhe ukuthintela izinto ezininzi ezisuka kwindawo engaphantsi komhlaba, ukubamba izindlu kunye nababulali abangaqondakaliyo, kodwa nokukhusela inkawu yeendaba kunye nentombazana engaboni eyambuzelayo uHuilan (Zhou Dongyu). Kukufutshane nenyaniso, kodwa inyani inobuqhetseba ngakumbi kunokuba wayecinga ...
Ezi nkqubo zilapha ngasentla zinokujongwa kwi-iTalkBB Chinese TV. Inombolo yomnxeba yasimahla 1800 482 552.
kuhle iyalayisha ………
微 博 KuCu QQ
Scan WeChat kwaye wabelane ngamaMama
ISichuan kunye neVictoria batshintshana ngezandla ezimnandi kumaza ekwindla! "Inkcubeko yaseTshayina, i-Splendid Sichuan" "Ukunyuka" eMelbourne! !
Umama khange akhathazeke ngam ngokungena kulo mzi! Indawo yokupaka iimoto eMelbourne yenza ukuba ungabe usazikhathaza ngeendawo zokupaka
Yazi into oyithandayo
Shiya uluvo Cofa apha ukucima impendulo.
Umhleli womyili weChinatown, mihla le ukuze abelane nawe ngeendaba ezikhethiweyo zaseOstreliya
uluvo lwamva nje
Olu luvo lukrelekrele kakhulu kwaye luluncedo.Enkosi ngeposi yakho
Amagqabantshintshi e-mymia ngoSuku loMama, nika eli nqaku kumama, kwaye uthethe into ngenkalipho: Mama!Ufuna eyiphi!
Xa okusesikweni koxolo kubuyiselwe kuye, angala ukukukhonza!Musa ukubaphatha njengoncedo!E-Australia, yena
Irhuluneli yase China, Hong Kong neTaiwan kuvela ukuba nawe unjalo!Ukutyhila abagwebi abade baseOstreliya boxolo
Nonogatupe Tupe Faʻafuaseʻi Talofa ngaphandle
U-Alexander Gavin ulumkisa kwi-ARS: Awufuni kukhathazeka?Kuya kufuneka uyikhumbule le mithetho mithathu (ngesikhokelo esipheleleyo sokufayilisha irhafu e-Australia)
Uzwilakhe ongathembekanga, ngubani ofuna ukuba liqabane lokurhweba nawe?中国落到今天这步田地不还是习近平Ngaba i-China ayisekho u-Xi Jinping?
123 Iindaba ezimbi ziyahlangana.Yintoni eyenziwe kakubi yiChina?
Inombolo XNUMX ngokulandelelana, kuphela kuluntu oluhle njenge-Australia olunokuzama
Uphengululo lwabaxhasi baseAustralia luyabandakanyeka! Ipolisa elingumTshayina laba ngunongogo emva kokuba liye e-Australia? ! Emva kweminyaka eli-12 yomsebenzi "wokuzimisela", kwapapashwa incwadi ...